Guqula ifayile ye-DGN isuke kwi-ED50 iye kwi-ETRS89 -Geofumadas
Ukutshintsha ED50 ifayile DGN ku ETRS89
NgoFebruwari, 2012 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Abasebenzisi abaninzi be-GIS bafumana ubunzima bokuguqula iinkcukacha ze-CAD kunye neenkqubo zokujonga. Sithetha umngeni kuba, kwiimeko ezininzi, olu tshintsho lunikeza umsebenzi osivumelayo ekugqibeleni silondoloze ulwazi oluninzi njengoko lunokwenzeka kwi data yasekuqaleni.
Kuyathakazelisa ukuba oku kusebenza kuza ne Microstation, kodwa ngokuqinisekileyo abo bayenzile apho baya kwazi ukuba i-intuitive ayisiyonto ikhethekileyo kubo. Ngeli xesha ndifuna ukubonisa ndisebenzisa olu ncedo olubonakalayo lokuba Geobide Suite ukucacisa indlela yokwenza ngayo, saphendukela kwiGeoconverter, ekubeni lo mguquleli wefomathi wendawo usinika ithuba lokwenza le nkqubo ngendlela echanekileyo, elula, kwaye simahla
Njengomzekelo, siya kuthatha ifayile yeDGN nge-reference ye-ED50, kwaye siyitshintshe ibe yi-ETRS89. Ukuze uguqulelo olubandakanya ifayile kwifomati ye-DGN ukuba lenziwe ngokuchanekileyo kunezinto ezinikezelwa ngokungafi, kuyacetyiswa ukuba kuqwalaselwe ngale miba elandelayo:
1. Izinto ezinjani zesel
I-Geoconverter -> Ithebhu yokufaka -> Ifomathi ye-DGN -> Abanye ithebhu -> ukhetho
Apha sitshintsha indawo yesalathisi yeyona nxalenye ngencazelo yayo yangempela kwilayibrari yeseli
Olu khetho lukuvumela ukuba ukhethe ifayile yeseli (okanye ikwabizwa ngokuba ziiseli), ezifanayo kwiibhloko ze-AutoCAD kwiMicroStation apho inkcazo yezinto zigcinwa khona ukuze ikwazi ukuyisa kwifayile yemveliso.
Nangona eli thala awabelwa, Geoconverter, xa kungekho kwenkcazelo iibhloko / iiseli, idala i ibloko elilingana kunye itekisi enegama block / iseli Original yi postprocessing xa ufuna ukubuyisela.
Ukuba kuchazwe ekuqaleni, inkcazo ezayo kwifayile ifakiwe.
Kwimeko ye-DGN, iiseli zikho .CELA ifayile yefayili nangona ingavulwa njengeifayile eziqhelekileyo ze-dgn, ngeenguqulelo ze-V8i.
Kwimeko ye-DWG, yinto kwimbewu apho iibhloko kufuneka zenziwe.
Xa DGN ifayile lokutshintsha kufuneka baqonde ukuba xa echaza isizathu umbhalo original yahlukile ngezantsi - ekhohlo (KUPHELA = LB ≈ 2) kufuneka uqwalaselo extra echazwe ngezantsi, ngokuba ubukhulu bamagama yombhalo uguqulela indawo yendawo yokufaka efanayo.
IGeoconverter ibonelela ngamathuba amabini xa urekhoda imibhalo kwifayile ye-DGN. Ngale nto, ikuvumela ukuba ubonise indlela esifuna ukuba ilawule ngayo indawo yokufaka isicatshulwa kunye nenqaku lomsebenzisi.
Ngakolunye uhlangothi sithola ithuba lokusebenzisa iifayile zendalo (* .rsc). Le fomati yefomathi ekhethekileyo yeMicStation apho ifayile ingaba nemithombo eyahlukeneyo, nganye leyo iboniswe ngenani negama.
IGeoconverter -> Igalelo lokungenisa -> Ifomathi ye-DGN -> Izixhobo ithebhu
Ngexesha lokuguqulwa, i-Geoconverter ifuna imithombo kwifayile (* .rsc) iboniswe kwiwindow yangaphambili. Ukuba awukwazi ukufumana ifayile yefonti ecacileyo, isebenzisa ifom ecaciswe ngokungaqhelekanga kwisilungiselelo senkqubo yokusebenza. Oku kunokubangela ukuba iicatshulwa zisuswe.
Ukuba uchaza ifayile yefonti (* .rsc), iGeoconverter uya kukwazi uhlobo lwencwadi omele ulondoloze kwifayile yokuya kuyo ukuze isikhundla seetekisi sifane nefayile yangaphambili.
Ngakolunye uhlangothi, kukho ukhetho oluvumela ukuba uhlaziye indawo yokufaka ifayile usebenzisa i-MicroStation.
I-Geoconverter -> Ithebhu yokufaka -> Ifomathi ye-DGN -> Abanye ithebhu -> ukhetho, nantsi sichaza kwakhona indawo yokufaka isicatshulwa
Olu khetho luqhuba inkqubo ye-MicroStation eboniswe kwitheyibhile Indawo ye-MicroStatio"Ukubala ubungakanani boqobo befonti yombhalo. Olu khetho lunona oluchanekileyo kuba iGeoconverter inako ukutolika ukucwangciswa kweMicroStation (ukususela kwindlela ebonisiweyo) kwaye usebenzise ifayile yesource echazwe kuyo.
I-Geoconverter ikuvumela ukuba uhlambele izinto ezahlukeneyo eziyinkimbinkimbi zibe ngamaziko alula.
Ngakolunye uhlangothi, kunokwenzeka ukuba uhlambele izinto zeseli / izithintelo zibe zixhobo ezilula nezizimeleyo.
I-Geoconverter -> Ithebhu yokufaka -> Ifomathi ye-DGN -> Ukucwangciswa kwethebhu
Kulo mzekelo lulandelayo unokuqinisekiswa ukuba emva kokuqhawula isalathisi esimele kumfanekiso we-1 umfanekiso, iziphumo ezininzi zimelelwe kumfanekiso we-2.
Ngakolunye uhlangothi, kunokwenzeka ukubolaza i-geometry yezinto kunye neengqungquthela kwizigaba ezilula.
Umzekelo olandelayo ubonisa kwiMifanekiso 1 imo apho umbandela ovalwe uboniswe kwifomati ye-CAD. Kwimifanekiso ye-2, iimpawu ezenza umgca we-1 ziyabonwa. Kwimifanekiso ye-3 ingaqinisekiswa ukuba i-Geoconverter ibonisa inani leempawu eziyimfuneko ukugcina i-geometry yendlela yokuqala.
Ngexesha lokudalwa kwefayili ye-CAD, kunokwenzeka ukucacisa ifayile yefowuni ekufuneka isetyenziswe kwinguqulelo. Le fayili iqulethe ulwazi malunga nemimiselo yamalungiselelo afana neyunithi yomsebenzi, ukunyuka, ...
Simele sikhumbule ukuba inkcazo yombala wepeyinti yeefayile ze-DGN ichazwe kwifayili yembewu, ngelixa kwiifayile ze-DWG, le palette ichongiwe.
I-Geoconverter -> Imveliso yokuphuma ithebhu -> Ifomathi ye-DGN -> Ukucwangciswa kwethebhu
Ukuba akukho fayili yembewu icacisiwe, i-Geoconverter isebenzisa isizukulwana esiqhelekileyo esihlanganiswe nesicelo. Into ececekisiwe kakhulu kukuchaza ukuba ufumane isiphumo esilungisiwe kwisimo semeko nganye.
Olunye ulwazi www.geobide.es
Post edlulileyo«Ngaphambilini AutoCAD ikhosi 3D kwi ucango lwakho, ngokuba $ 34.99
Post Next Iindaba ze-4 ezivela kwiGoogle Earth 6.3Okulandelayo »